Halyaygii Liverpool Ee Steve Nicol Oo Shaki Galiyay Tayada Thomas Lemar Isaga Oo Soo Jeediyay In Riyad Mahrez Iyo Goolhaye Donnarumma Ay U Dhaqaaqaan. - Laacib.net
Halyaygii Liverpool Ee Steve Nicol Oo Shaki Galiyay Tayada Thomas Lemar Isaga Oo Soo Jeediyay In Riyad Mahrez Iyo Goolhaye Donnarumma Ay U Dhaqaaqaan.
Halayaygii hore ee kooxda Liverpool ee Steve Nicol ayaa shaki galiyay tayada xidiga kooxdiisii hore ee Liverpool doonayso ee Thomas Lemar wuxuuna Reds u soo jeediyay in ay u dhaqaaqaan soo xero galinta goolhayaha AC Milan ee Donnarumma halka uu sidoo kale dhiiro galiyay in Riyad Mahrez uu yahay mid u fiican sidii Coutinho.
Steve Nicol ayaa shaki ka muujiyay in Thomas Lemar oo ay kooxda AS Monaco lacag qaali ah ku doonaysaa uu la heer noqon karo halka uu hadda Coutinho kaga baxay Liverpool halka uu sidoo kale sheegay in Liverpool ay u baahan tahay goolhaye tayo sare leh.
Steve Nicol oo Lemar ka hadlaya ayaa yidhi: “Sababta aan u tuuray Lemar waa in markii uu Coutinho saxiixay ay jirtay su’aal ka taagnayd in uu gaadhayo heerka uu hadda joogo, taasi waa sababta uu halkaas uu joogo. Labada arimood ee aan filayo in ay Liverpool u baahan tahay ayaa ah goolhaye, canugan Donnarumma wax su’aal ahi kama taagnaan doonto, anigu ma garanayo inta sanadood ee ay noqon doonto, waxa uu maalin noqon doonaa goolhayaha aduunka ugu fiican”.
Steve Nicol oo kooxdiisa ku sii dhiiro galinaya saxiixa goolhaye Donnarumma ayaa yidhi: “Isku daya in aad isaga hadda heshaan kadib waxaad toban sano heli doontaan goolhaye heer sare ah, goolhaye sax ahi waxa uu xili ciyaareedkii kuu badbaadinayaa 10-15 dhibcood”.
Steve Nicol oo ka sii hadlaya Mignolet iyo Riyad Mahrez ayaa yidhi: ” Taasi waa waxa ay Liverpool hadda laadahay ee ay ku haysato Mignolet. Riyad Mahrez xogtiisa dhabta ah ee saddexdii xili ciyaareed ee uguu danbeeyay waxa ay u fiican tahay sida Coutinho. Isagu sida Coutinho ciyaartoy fiican uma aha laakiin ninkani waxa uu isku cadeeyay Premier League kaas oo mararka qaar yara khaas ah”.
Steve Nicol ayaa hadalkiisa ku soo xidhay talo uu Liverpool ku adkeeyay wuxuuna yidhi: “Sidaa daraadeed, haddii aad heli kartan Mahrez waxaad heli kartaan Donnarumma, kadib waxaan filayaa in ay Liverpool ka sii fiicnaan doonto”.
mohamed Deeq Alfa 10-01-2018 at 7:20 pm -
waxan jeclan lahaay inaa lakeeno Riyad mahrez